China 2K Mihoatra ny mpamolavola bobongolo mpanamboatra sy mpamatsy | Enuo mould
Bobongolo roa loko （2Kmold）:Karazana fitaovana plastika roa novolavolaina tamin'ny milina fanefena tsindrona iray ihany, ary namboarina tamin'ny faritra roa, fa ny vokatra indray mandeha monja. Amin'ny ankapobeny dia antsoina koa ity fizarana famolavolana ityfamolahana tsindrona fitaovana roa sosona, mazàna vita amin'ny lasitra iray, ary mila milina fanoritana tsindrona loko roa manokana.
Bobongolo be loatra:Karazana fitaovana plastika roa dia tsy voatery atsindrona amin'ny milina fanefena tsindrona iray ihany, ary atambatra amin'ny faritra roa; aorian'ny fanesorana ny vokatra avy amina andiana bobongolo dia apetraka amina lasitra iray hafa ho an'ny famolavolana fanindronana faharoa. Noho izany, amin'ny ankapobeny, ity fizotry ny famolavolana ity dia mazàna vita amin'ny lasitra roa, tsy mila loko roa manokanamilina fanaovana tsindrona.